Boscobel House the "Hunters Den" #2 Hunt, Fish - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSteve&Diane
Iveki ukuya kwinyanga + hlala. Umsebenzi, Ukufuduka, Ikhefu. Lonke igumbi lokulala elinye elinekhitshi. I-Hunter's Den ihonjiswe kakuhle ngebhedi ye-Queen, ilala i-1 okanye i-2. Sisandul 'ukuyila umgangatho ophezulu wendlu ukulungiselela ukutyelela usapho kunye nabahlobo. Ngoku sinikezela kuwe! Umxube omangalisayo, wendalo wedolophu enendalo eninzi kunye nazo zonke izinto eziluncedo ngaphakathi kweebhloko. I-14 acre creek bottoms indawo enomlambo wetrout odlulayo
Iindawo zakho ziquka: igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineetawuli, iimpahla zephepha, kunye nesepha enikeziweyo. Yinkulu, intsha, kwaye ikhanyiswe kakuhle. Igumbi lokuhlala elincinci. I-WIFI entle.
Ikhitshi eline microwave, ii-oveni zetoaster, imbiza yekofu enekofu, kunye nefriji. Iholo idibanisa onke amagumbi aphezulu, izinyuko, kunye nefoyer.
*YENDALO* Indlu isecaleni komnyango we-389 acre, Mississippi Valley Conservancy. Le yindawo kawonke-wonke evuleleke kuhambo lwangaphandle lokuzonwabisa, indalo kunye nokubukela iintaka, ukuzingela, ukutyibiliza, ukutyibilika ekhephuni kunye nokuzonwabisa nje. Kufakwe kwimizuzu nje ukusuka endlwini kukho amawaka eehektare zomhlaba kunye noMlambo iWisconsin ohambayo. Iindwendwe zingakonwabela ukukhenketha, ukukhwela ibhayisekile, ukuzingela, ukukha amaqunube, okanye ukuzingela amakhowa. Iindwendwe zingathatha uhambo losuku ukuya ephenyaneni okanye kwi-kayak phantsi koMlambo i-Wisconsin. Ukuloba amanzi amaninzi angasemva kunye namachibi amancinci ecaleni komlambo, ukuloba izikhephe emlanjeni, okanye ukuloba imilambo emincinci kunye nemilambo ejikeleze loo ndawo. Ukukhwela iLiwa kwi-Castle Rock yinto evuyisayo enikezela ukunyuka okukhulu kunye neembono ezintle. Intsimi enesibindi ijikeleze iliwa, kumnandi ukuhamba kunye nokuphumla. Umjelo weCastle Rock udlula ngasetyeni kwaye waziwa ngokuba ngumjelo ogqwesileyo wetrout. *URBAN* Undwendwe lunokuthatha ithuba lazo zonke izinto eziluncedo zasedolophini ngaphakathi kweebhloko ezibandakanya; Isikhululo seenqwelomoya, indlela yokuhamba edolophini, ukumisa isikhephe esinendawo yepikiniki, iphenyane kunye nerenti yekayak, ukuthenga, iipaki, ithiyetha, iibhanki, iindawo zokuhlala zasekhaya, iithaveni, ukutya okukhawulezayo, iiklabhu zasebusuku, ibuffet, igalufa, i-bowling alley, mat yokuhlamba impahla, i-24hr gym, ukuhlamba iimoto. , ukulungiswa kweemoto, isiselo sebhiya yewayini, iimpahla zemidlalo, irhasi, i-ATM, i-inshurensi, kunye nokunye(URL HIDDEN) Ubuninzi beNdalo & I-URBAN ngaphandle komnyango kwaye ZONKE ukuze iiNdwendwe zethu zizonwabele.
Kwindibano yesithuthuthu okanye imoto yokhenketho lweeNdwendwe, iBoscobel House ihleli kwiSango eliMazantsi leOcooch kunye neeNtaba zeSmoke. Ukusuka kwibhulorho yethu yoMlambo iWisconsin, uluhlu lunwenwela emantla lulandela uMlambo iMississippi ukuya entshona kumgama ongaphezulu kweemayile ezili-100. Kukho amawaka eekhilomitha zeendlela ezigoso ngasemva, iibluffs ezinkulu, iintlambo ezijikajikayo ezinzulu, iindawo eziphakamileyo zemimango kunye nokunqunyulwa koMlambo iKickapoo kuphosa intliziyo yoluhlu ukusuka emantla ukuya emazantsi kunye noluntu oluncinci oluthe thaca kwiindonga zayo. Uluhlu lwayo oluhle, Undwendwe olukhenkethayo lunokuphonononga usuku kude!
Umbuki zindwendwe ngu- Steve&Diane
Sinendawo yokuhlala kwindawo esezantsi yekhaya esihlala kuyo, yahlukile kwiindawo zethu zeendwendwe. Zonke iindawo zangaphandle zixhaphakile. Sikho ukuze sibone ukuba indlu isebenza kakuhle kwaye sincede kwiimfuno zeendwendwe zethu.
Injongo yethu kukubonelela ngeNdawo yokuHlala Okucocekileyo, Okona Kutofotofo, Okuzolileyo, okuNandiphekayo kunye nokuKhathazayo esinokukubonelela ngeeNdwendwe zethu zakwa-Airbnb.
Boscobel House hosts, uSteve&Diane
Sinendawo yokuhlala kwindawo esezantsi yekhaya esihlala kuyo, yahlukile kwiindawo zethu zeendwendwe. Zonke iindawo zangaphandle zixhaphakile. Sikho ukuze sibone ukuba indlu isebenz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boscobel